I-Cliff Cottage, yanamhlanje & enomoya eneembono zasemaphandleni
Le ndlu yanamhlanje inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale uphumle kwindawo entle yasemaphandleni, kufutshane nonxweme olunelifa lemveli, iidolophu ezikunxweme lolwandle kunye nezinto ezinomtsalane. Ukulala i-5 kwigumbi lokulala elikhulu le-Kingsize en-suite enebhafu, kunye negumbi lokulala eliphindwe kathathu elinendlu yangasese, le ndlu ixhotyiswe kakuhle inegumbi lokuphumla elikhulu elinesitovu somlilo sokwenyani, ikhitshi / isidlo sangokuhlwa esigcwele ngokupheleleyo kubandakanya ubungakanani obugcweleyo befriji, umatshini wokuhlamba. umatshini wokuhlamba izitya kunye neNespresso kunye negumbi lokuhlambela elisezantsi.
I-WiFi yasimahla kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Ifenitshala yegadi, isiselo esinxilisayo elangeni.
Sivumela inja e-1 eziphatha kakuhle kwindlwana nganye kodwa kufuneka kwaziswe kwangaphambili kwaye kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-£ 35 eya kuthathwa emva kokuba ubhukishelo lwakho lwenziwe (okanye ekufikeni). Ukuba unqwenela ukuzisa ngaphezu kwenja enye kufuneka uncede uqhagamshelane nathi kuqala.
Inxalenye yendawo ye-PK Cottages, iCliff Cottage ikwindawo efanelekileyo yokuphumla engqongwe ngamaphandle amahle, ngeli lixa ingumganyana nje omfutshane ukusuka kwiindawo ekuya kuzo kubandakanya iFiley, iBridlington kunye neScarborough. Kuphela kukuhamba nge-40min okanye imizuzu emi-5 yokuqhuba yeyona ndawo imangalisayo ye-RSPB yolondolozo lwendalo ebekwe kunxweme lweLifa leMveli kunye nekhaya lamawaka eentaka zolwandle kunye neepuffins ezidumileyo zaseBempton. Umtsalane wosapho njengeSewerby Hall, iSledmere Hall kunye neelwandle eziphumelele ibhaso zonke zifikeleleka ngokulula. Kukho i-pub yasekhaya eBempton umgama nje we-10 lokuhamba kwaye iivenkile kunye nezinto zasekhaya ziyimizuzu emi-5 ngemoto. Kunye neekhilomitha zokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile kubandakanya neYorkshire Wolds, kukho into yakhe wonke umntu apha.